General Subxaanyo: Maxbuusaa la haynayaa marka la yiraahdo, ba... | Universal Somali TV
General Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) oo ka tirsanaa Saraakiishii Ciidanka Asluubta ee Dowladdii Dhexe ayaa si qoto dheer uga hadlay weerarkii maalin ka hor ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Xamar.
General Cabdulqaadir Cali Diiriye ayaa wax naxdin leh ku sifeeyay dhacdadii ka dhacday Xabsiga Dhexe, isagoona ka dhawaajiyay dhawr arrimood oo is biirsaday inay sababtay.
General Subxaanyo ayaa yiri “Arrintaasi runtii marka la fiiriyo waxaa weeye dhacdo naxdin leh bay ahayd, waxaana u sababeynaya dhawr arrimood. Waxaa weeye Soomaalida dhibka haystaa 4.5-kii baa wuxuu keenay in Ciidanka Asluubta iyo ciidan walboo nimaan shaqo ku laheyn oo weligii aragba in loo dhiibo, taa waxay keentay qofka xirfadiiba ma yaqaano, weligii kama shaqayn, shaqadaan waxay tahay ma yaqaano. Markaasaa la leeyahay meeshii taliyaa ka tahay ama taliye kuxigeen baa ka tahay. Nasiib-darrada dalka ku dhacday bay ka mid tahay.”
“Horta Soomaalida waxaynaan ka warqabin macal dowladda kama warqabto. Maxbuusaa la haynayaa marka la yiraahdo horta bambaa gacanta ku haysaa, ninka maxbuus loo dhiibo, bambaa loo dhiibay, gaanjadii ka maqan tahay, bambadii saasuu u hayaa. Haddii marka aadan aqoonin sidaad u hayn laheyd, adiga ayay kuugu qarxeysaa ama dadkii baa ku qarxineysaa. Marka maxbuus hayntiisu wax ciyaara maaha, sanooyin baa nala soo baraayay maxaabiista, sida loo ilaaliyo iyo sida loo hayo, tusaale waxyaalo badanoo ka mamnuuca baa meesha ka dhacay hadda, sida iiga muuqata.”
“Horta sideedaba mabda’iyan lamaba ogolo, waana mamnuuc, xabsiga gudahiisa in hub lala galo, xitaa haddii Taliyaha Ciidanku kormeer ku imaanayo xabsiga gudahiisa waa in hubka oo dhan bannaanka uu yaalo, maxaa yeelay waxaa la diidayaa in nin maxbuus ah uu hubkaa helo, dhib-na gaarsiiyo umadda, taliyaha ama ciddii meesha joogta. Marka hub waa ka mamnuuc, laakiin waxaa lala saarnaan karaa meelaha kore ee geesaha xabsiga ama bannaanka, laakiin gudaha laguma haysan karo, waa ka mamnuuc.”
“In meeshii la yiraahdo bambooyin iyo rasaas baala geliyay waxaa weeye wax nasiib-darro ah oo xun, waxayna ku dhacday dayacaad ama laba arrimood bay ku dhacday. Dadkii maamulka ee shaqadaan loo dhiibay oo aan feejigneyn, oo kormeerkii iyo shaqadii laga rabay ee maalinlaha ahayd aan sameynin. Kormeer maalinle ah wax la yiraahdo ayaa jira xabsiga, maalin walba waa inaad fiirisaa, subax walbana soo gashaa gogosha, maxaa yaala, maxaase la soo geliyay.”
“Askarigii waa baahan yahay mararka qaarkood ama niman Shabaab ahaa meesha ku jira ama dad cadow kalaa ku jira ama dad xabsi daa’inaa ku jira, marka qofkii lacag buu adeegsanaya, askarigiina waa baahan yahay, lana baari maayo. Asagiiyaa bambooyinkii intuu gacanta ku soo qaado buu ninkii u keenayaa, haddii lacag xoog leh la siiyo uusan fileynin. Tan labaad raashiinkii baa laguu soo gelinayaa.”
General Subxaanyo ayaa warkan ku sheegay wareysi uu siiyay Laanta afka Somaliga ee VOA.
Kan-xigaMadaxweynaha Galmudug oo gaaray Magaa...
Kan-horeQoorqoor oo dib ugu laabtay Magaalada...
55,439,936 unique visits